I-La Casita Capylvania (Indlu ye-Little Choke-Cherry) - I-Airbnb
I-La Casita Capylvania (Indlu ye-Little Choke-Cherry)
San Miguel County, New Mexico, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Brenda
Indawo yasemaphandleni kakhulu nokuchayeka ku-coronavirus Virus incane... Le ndawo yokufihla izwe ikhonyiwe ezansi kwe-Rocky Mountains, umzuzu ongu-1 ukusuka ku-I-25 edolobhaneni lase-Rowe. Ihlala epulazini langasese elingama-acre angu-30. I-Santa Fe ikude ngemizuzu engu-25. Kunokufinyelela okuseduze ezindaweni eziningi zase-US Forest, i-Pecos National Monument, i-Village of Pecos, ne-Pecos River. Amanzi ethu omthombo aqinisekisiwe.
Nge-Santa Fe nje imizuzu engu-25 ukusuka nokufinyelela okulula ku-I25 uzoba ne-Downtown Plaza, Izindawo zokudlela, Ukuthenga, Iminyuziyamu, Amagalari, i-MeowWolf, nakho konke okunikezwa yi-SF Yomlando. Izinto ezenziwa ngaphandle ze-Pecos Wilderness ziseduze futhi ziningi kakhulu ongazifaka. Imizuzu emihlanu ukuya Esikhumbuzweni Sikazwelonke se-Pecos. Ukubukwa kwezilwane zasendle nezinyoni kuyinto ephawulekayo kuleli khaya elithokomele esilibiza ngokuthi "i-La Casita Capylvania" (Indlu ye-Little Choke-Cherry) Woza uzitholele le ndawo esanda kutholakala (ekude kodwa eseduze)!
4.82 · 129 okushiwo abanye
Ngaphandle uma ushayela e-, omakhelwane abakwazi ukuzwa noma ukubonwa. Zizwe ukhululekile futhi ucabange 24/7. Asikwazi ukugcizelela isethingi enokuthula! Ngeke ufune ukuhamba... okungenani ungabuya futhi:)
Umbungazi usegcekeni elingu-100 ukusuka endlini enkulu. Ukulungele ukuphendula noma yimiphi imibuzo noma ukubhekana nanoma yiziphi izidingo. Silapha ukuze sikusize!
Hlola ezinye izinketho ezise- San Miguel County namaphethelo